Landa i-Grumman S2F-3 Tracker FSX & P3D Iphakheji - iRikoooo
Usayizi 76.1 MB
Play 16 564
Umbhali: Milton Shupe - Eagle Rotorcraft Sekusetshenziswa
Kubuyekeziwe on 17 / 03 / 2019 : Manje iyahambisana Prepar3D i-v4, i-v10.5 efakiwe
Kuqala ukwenziwa iFS2004 nguMilton Shupe, lokhu FSX I-Grumman S2F-3 iyi- FSX ukuthuthukiswa kwendabuko kuya kokwangempela. The FSX I-S2F-3 ngokugcwele FSX/P3D iyahambisana futhi isebenzisa okuningi FSXIzici eziwukuphela, kufaka phakathi ukuqhuma kwebalazwe nokutholakala kwemephu ..
I-Grumman S-2 Tracker (eyayibizwa ngokuthi i-S2F ngaphambilini) yayiyizindiza zokuqala ezithwala ngokuqondile impi yokulwa ne-submarine (ASW) yokufaka inkonzo e-United States Navy. Ngaphambi kwalo, i-AF-2 Guardian yayiyakhelwe okokuqala impi yokulwa nomkhumbi, kodwa yayisebenzisa izinguqulo ezimbili, imishini yokuthola ibhodi kanye nezinye izikhali eziphethe.
S-2 elikhona ngesimo a twin-engine, high-wing ne elongations eqinile. Inama amathathu kokwehla gear, ophephela ezimbili Wright Cyclone R-1820 zokusebenzisa ophephela ezintathu-bladed.
Amabalazwe wokuzithiba, amabala, namabalazwe acacile
2 liveries - wagijima USN
DirectX 10 Kuyavumelana
I-Grumman J2F Duck FSX & P3D